Nhau - Ungawana sei chitaurwa chaicho chebhegi rako chirongwa?
Vatengi vazhinji vari kutsvaga mafeketi emabhegi vanotarisira kuwana makotesheni akajeka nekukurumidza sezvinobvira kune avo mabhegi akagadzirwa. Nekudaro, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, zvinonetsa kuti vagadziri vakupe chaiyo yakadzokororwa kota pasina sampuro kana bhegi ruzivo. Muchokwadi, pane nzira yekuwana yakanyanya kunaka kotesheni, ngatitarisei!
Mafekitori evhegi anowanzoverenga mutengo zvichienderana nedhizaini, zvinhu, uye saizi yebhegi. Kana mutengi achingotumira mifananidzo kumugadziri, mugadziri haana chokwadi nezve zvakadzama zvepakeji uye haakwanise kupa chitaurwa chaicho.
Naizvozvo, kana iwe uchida kuwana yakadzokororwa yakadzokororwa, nzira yakanakisa ndeyekutumira iyo sampuli pasuru kune iye mugadziri uye rega iye mugadziri ataure iwo chaiwo mutengo. Kana iwe usina sampuli yemuviri, iwe unogona zvakare kupa yakadzama dhizaini dhizaini kune iye anogadzira. Iyo inogadzira inogona kugadzira bhodhi zvinoenderana neyako dhizaini. Mushure mekunge sampuro yapera, mutengo unozobuda.
Pamusoro pezvo, zvakakoshawo kuti utengere, kuitira kuti ugone kuwana zano rakaomarara remutengo wemabhegi uye kuti usanyengerwe nevamwe vagadziri vasina kujaira vachitaura mitengo yakakwira nemaune.